Beloha Androy: sokatra 1 000 naverina anaty tontolo voajanahary - ewa.mg
News - Beloha Androy: sokatra 1 000 naverina anaty tontolo voajanahary
Natao, ny 27 jolay teo, ny
famindram-pitantanana ny faritr’ala amin’ny fikambanana Vondrona
olona ifotony (VOI) Sihanakamba Mahavelo. Ivondronan’ny fokontany
dimy, kaominina roa any amin’ny distrika Beloha, faritra Androy,
ity fikambanana ity. Fanavaozana ny fifanarahana ity natao ity,
hitantanan’ny VOI mandritra ny telo taona manaraka indray.
Notanterahina nandritra ny fotoana
ihany koa ny famerenana sokatra manodidina ny 1 000 any amin’ny
toeram-ponenana voajanahary. Nogiazan’ny fikambanana Turtle
Survival Alliance Madagasikara (TSA) nandritra ny 10 taona tany
amin’ny toby Ala Mahavelo any Tsihombe Androy ireo sokatra ireo ary
izao naverina amin’ny tontolo voajanahary any Beloha indray. Nilaza
ny mpandrindra nasionaly ny TSA, ny Dr. Randriamahazo Herilala, fa
voalohany ny nanaovana hetsika toy izao satria maro ny fenitra
iraisam-pirenena (IUCN) tsy maintsy arahina, toy ny
ara-pahasalaman’ny sokatra, ny fanaraha-maso ny sakafo, ny
Ankoatra izany, nanolotra vary 20
kitapo ho an’ireo fokontany dimy, mandrafitra ny VOI Sihanakamba,
ny TSA Madagasikara, hanalefahana ny ady amin’ny kere any
Nisolo tena ireo fokontany
nankasitraka ity fotoana ity ny filohan’ny vondron’olona ifotony, i
Dama. Anisan’ny nanatrika ny fotoana ny mpitantana ny kaominina, ny
distrika, ny prefe, ny faritra Androy, ny fitantanam-paritry ny
Tontolo iainana, ny Zandarimaria, sns. Nisy ny fomba amam-panao
nanomezana hasina ny foko any an-toerana.
L’article Beloha Androy: sokatra 1 000 naverina anaty tontolo voajanahary a été récupéré chez Newsmada.
Tany Meva: hamboly zana-kazo 30 000
Nisantatra ny fotoam-pambolen-kazo ho an’ny taona 2020-2021 tamin’ity volana ity ny Fondation Tany Meva, fotoana hifarana ny tapaky ny volana febroary 2021, araka ny fanazavana. Efa manana toerana manokana fanatanterahana izany izy ireo any Ankarabe, distrikan’Ankazobe. Nahatratra 30 000 zana-kazo natsatoka, araka ny nambaran’ny tale mpanantanteraka ny Fondation, i Fanohiza Claude. Midadasika amin’ny velarana 238 ha ny toeram-pambolen-kazo ary zana-kazo 12 000 ny voavoly nanomboka ny taona 2008 no ho mankaty. 95% amn’ireo zana-kazo nambolena no velona sy nitombo araka ny tokony ho izy satria manampy amin’ny fikarakarana eny ifotony ny mponina eny amin’ny manodidina anatin’ny tanàna efatra. Miaro ny faritra amin’ny doro tanety ihany koa izy ireo satria mahatsapa fa lova ho an’ny taranaka ny fiarovana ny tontolo iainana. Nandray anjara tamin’ny fambolen-kazo ny ben’ny Tanàna ao amin’ny kaominina Ankazobe sy i Talata Angavo.VonjyL’article Tany Meva: hamboly zana-kazo 30 000 a été récupéré chez Newsmada.
Asa “Tagnamaro” andiany fahenina: niompana tamina toerana telo ny asa
Toerana telo ny nanaovana ny hetsika asa “Tagnamaro”, ny faran’ny herinandro teo teto Antananarivo Renivohitra. Anisan’izany ny teny Soanierana, nanamboarana ampahan-dalana ahina hitera-doza mandritra ny fahavaratra ho avy izao.Efa simba efa ela izany ampahan-dalana mapitohy an’i Soanierana Ambony sy Ambany izany. Lalan’ny taxi-be eny an-toerana ihany koa io ka mahavelon-taraina ny mponina eny an-toerana. Nandray an-tanana ny fanamboarana ny minisiteran’ny Serasera sy ny kolontsaina. Hatao asa tana-maro ny ampahan’ny fanamboarana. Tsy maintsy hampiasana milina matanjaka kosa ny asa sasany satria sarotsarotra sy mila teknisianina mahafehy izany, araka ny nambaran’ny minisitra Rakotondrazafy Lalatiana.Nisaotra ny minisitra ny mponina eny an-toerana. Efa imbetsaka ny taratasy fampilazana ireo manampahefana ny amin’ny tokony hanamboarana izany lalana izany nalefan’ny mponina, saingy tsy nisy nanoina. Nitady vato ka sendra toko anefa izy ireo ankehitriny.Nitohy teny Analakely sy ny manodidina ny fanadiovana avy eo. Nanadio ireo loto avelan’ireo mpilalao amin’ny alina sy ny mpatory an-dalambe ny ekipan’ny asa “Tagnamaro”.Namaranana ny hetsika ny teny Andravoahangy Tsena, niarahana tamin’ny antoko Freedom. Nambaran’ity antoko ity fa fitaizana ny olom-pirenena hahay hikojakoja ny fananana iombonana ny tena zava-dehibe.Tatiana AL’article Asa “Tagnamaro” andiany fahenina: niompana tamina toerana telo ny asa a été récupéré chez Newsmada.
Saika lasa lavenona ny tanànan’i Malalia any Iaritsena, distrikan’Ambalavao, noho ny firehetana niseho, afak’omaly alina. Fantatra fa afo nampirehetin’ny zazalahy tao amina trano iray no niitatra ka nandrava trano sivy amby roapolo tafo. Soa fa tsy nisy ny aina nafoy sy ny olona naratra. “Mifanakaiky ny ankamaroan’ny trano eo an-tanàna. Mafy ihany koa ny fitsokan’ny rivotra, tamin’io fotoana io, ka nampitatra haingana ny afo. Nisy ihany ny trano vitsivitsy voavonjy”, araka ny fitantaran’ny mponina any an-toerana. Tokantrano iraika amby telopolo no mipetraka amin’ ireo trano sivy amby roapolo. Tsy latsaky ny telonjato ireo tra-boina. Trano lehibe misy rihana, mitafo bozaka, ny ankamaroan’ireo may. Tsy nisy avotra ny entana tao anatiny. Tonga nijery an’ireo niharam-boina tany antoerana ny solombavambahoakan’Ambalavao, omaly, sady nanolotra fanampiana toy ny vary, menaka sy ronono, koveta sy zinga. L’article Fahamaizana tanana :: Trano sivy amby roapolo ravan’ ny afo nampirehetin’ny zazalahy iray est apparu en premier sur AoRaha.
Fiatrehana ny lalao Olympika 2020: nankasitraka ny tomponandraikitra ireo atleta malagasy
Nitondra ny teny fankasitrahana ho an’ireo tomponandraikitra isan-tsokajiny nahafahan’izy ireo nisolotena ny Malagasy tany amin’ ny lalao Olympika notanterahina tao Tokyo ireo atleta malagasy enina mianadahy, notarihin’Andriatsitohaina Eric, omaly. Nisaotra manokana ny filoham-pirenena malagasy, Andry Rajoelina, ny minisitry ny Fanantanjahantena, i Tinoka Roberto ary ny filohan’ny Kaomity Olympika sy ireo federasiona rehetra isan-tsokajiny izy ireo. Tsy hadinony koa ny nitodika manokana tamin’ireo mpanazatra nanosika azy ireo tsirairay avy ary ireo mpanohana nandritra ity fifaninanana natao tany Japana ity. Tsapan’ireto atleta ireto fa zava-poana ny ezaka nataon’izy ireo raha toa tsy nisy ny fandraisana an-tanan’ny fitondram-panjakana sy ny federasiona. Raha tsiahivina miisa enina mianadahy ireo atleta nandray anjara tamin’ity lalao Olympika 2020 ity ary efa nifarana avokoa ny fandraisana anjaran’izy ireo. Avo lenta tanteraka ny fifaninanana, saingy tsy nitsanga-menatra ary nanao ny ainy tsy ho zavatra hatramin ‘ny farany ireo solontena malagasy ireo. Mitodika amin’ny lalao manaraka atao any Paris, amin’ny taona 2024 indray ireto atleta malagasy ireto, taorian’ity tany Tokyo-Japana ity.Tsiferana R.L’article Fiatrehana ny lalao Olympika 2020: nankasitraka ny tomponandraikitra ireo atleta malagasy a été récupéré chez Newsmada.
Tafakatra 232 ireo maty: nandavo olona roa ny covid-19
Mbola miovaova be ihany. Roa indray ireo lavon’ny covid-19, tao anatin’ny 24 ora. Avy any Alaotra Mangoro sy Matsiatra Ambony izy ireo. Tafakatra 232 izany izao ireo matin’ity valanaretina ity eto amintsika, hatramin’ny 19 marsa no ho mankaty.Etsy an-daniny, miisa 46 ireo tranga vaovao ka avy eto Analamanga ny enina. Miisa 15 kosa ireo nifindran’ny valanaretina any Diana. Nihena efatra ka 15 kosa ireo anaty fahasarotana, miaraka amin’ireo mbola mitondra ny tsimokaretina sy mbola arahi-maso, miisa 790.Na izany aza, miisa 129 ireo sitrana ka avy eto Analamanga ny 118 amin’izany. Tafakatra 15 430 izao ireo nahafeno ny fepetra ho amin’ny fahasitranana. Mahatratra 16 454 kosa ireo mitondra ny tsimokaretina hatramin’ny marsa no ho mankaty.Miisa 71 089 ny fitiliana PCR vita raha 8 100 kosa izany ho an’ny fitiliana Genexpert.Synèse R.L’article Tafakatra 232 ireo maty: nandavo olona roa ny covid-19 a été récupéré chez Newsmada.
Fiaraha-mientan’ny fiarahamonina :: Fanadiovana ny Oniversite no nanamarihana ny “Tagnamaro”
Tontosa tamin’ny sabotsy lasa teo, ny andiany fahadimy, tamin’ny hetsika “Tagnamaro”. Nambaran’ny tale jeneralin’ ny Kolontsaina eo anivon’ny minisiteran’ny Fifandraisana sy ny kolontsaina, Razafiarison Francis, fa efa azon’ny olona tsikelikely ny antom-pisian’ity hetsika ity. “Mitombo isa hatrany ireo karazam-pikambanana mandray anjara amin’ny Tagnamaro manerana ny Nosy”, hoy Razafiarison Francis. Tamin’ny sabotsy lasa teo, dia teny amin’ny Oniver- siten’Antananarivo no nanaovana ity asa fanadiovana mendrika valin-tanana ity. Nanampy ny tompon’andraikitra sy ny mpianatry ny oniversite, izay nanadio, nanala lobolobo ary nandoko ireo toerana sasany tao amin’ny oniversite. Zavadehibe ny fikolokoloana ny oniversite satria soa iombonana izany. Ny Oniversiten’Antananarivo rahateo dia anisan’ny oniversite be mpianatra indrindra eto Madagasikara. L’article Fiaraha-mientan’ny fiarahamonina :: Fanadiovana ny Oniversite no nanamarihana ny “Tagnamaro” est apparu en premier sur AoRaha.